गोर्खाल्यान्ड र मधेस आन्दोलन—विवेक श्रेष्ठ – Maitri News
गोर्खाल्यान्ड र मधेस आन्दोलन—विवेक श्रेष्ठ
भारतमा पश्चिम बंगाल सरकारले सेना र प्रहरी परिचालन गरी दार्जिलिङमा नेपाली भाषी गोर्खाहरुमाथि बर्बर र चरम दमन गर्न सुरु गरेपछि त्यहाँ अनिश्चितकालीन आम हडताल आह्वान गरिएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा मुक्ति मोर्चाले त्यहाँ बसोबास गर्ने गोर्खाहरुको पहिचान,भाषा,सभ्यता,संस्कृति र धर्मका लागि भएको आन्दोलनलाई सरकारले चरम दमन गरेकाले अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्नुपरेको बताएको छ । त्यहाँ नेपाली भाषी गोर्खाहरुमाथि चरम दमन हुँदा पनि नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालका अधिकारवादी भन्नेहरु पनि मौन छन् । नेपाली भाषीहरुमाथि यत्रो दमन हुँदा नेपाल सरकार र यहाँका अधिकारवादी संघसंस्थाहरु बोल्नुपर्ने होइन ? भारत सरकारलले के भन्छ ? दानापानी दिन्छ कि दिन्न ? भनी चूप लागरे बस्ने हो र ? उता दार्जिलिङमा नेपालीहरुमाथि त्यत्रो दमन भइरहेको छ भने यता संविधानसभाबाट बनेको नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान असफल बनाउन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नामको केही मधेसी टाठाबाठाहरुको मोर्चा बनाएर चुनाव हुन नदिने खेल भइरहको छ । नेपालको संविधान मन नपरेको भारतलाई जसरी पनि यो संविधान असफल पार्नुछ । त्यसैका लागि अहिले राजपाका नाममा तराईमा चुनाव विथोल्ने आन्दोलन गराइँदै छ । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा बनाइएको राजपासामु काँग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार नतमस्तक छ । संविधान र ऐन कानुनविपरीत राजपाले जे जे भन्छ त्यही त्यही मान्दै हिँडेका छन् देउवा र प्रचण्ड । यो भन्दा अर्को विडम्बना के हुन्छ मुलुकका लागि ? सधैं नपालीलाई असफल र दास बनाउने ?
इतिहास हेर्ने हो भने पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ र दुवर्समा बस्ने अधिकांश नेपाली हुन् ,गोर्खाहरु हुन् । उनीहरुको भाषा नेपाली हो । संस्कृति नेपाली हो । उनीहरु बस्ने भूमि नेपालको हो, हडपेर भारतमा बिलय गराइएको हो । सन् १९०७ देखि नै उनीहरुले ब्रिटिस सरकारसँग गोर्खाल्यान्डको माग गरे । सुनुवाई भएन । ५ अप्रिल १९८६ देखि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन सुरु गर्यो । सो आन्दोलन जारी छ तर गोर्खाहरुको माग अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममत बनर्जीले अहिले जुनखाले दमन गरिरहेकी छन् यो सरासर नेपालीमाथि गरिएको अन्याय र अत्याचार हो ।
यता नेपालले आफै संविधान बनाएको भारतलाई मन परेन । त्यही भएर उसले नाकाबन्दीदेखि मधेसमा हिंसात्मक आन्दोलन गराएर नेपाललाई दुःख दिदै छ । तैपनि नचाहदा नचाहदै गराइएको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले देखाइसक्यो अब नेपाली जनता कसैको दास होइन मालिक बन्न चाहेका छन् । मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्ने,मुलुकको अग्रगमन र विकासको लागि सही नीति लिएको पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न नेपाली जनता आतुर छन् भन्ने सन्देश दियो नेकपा एमालेलाई जिताएर पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले । राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दागर्दौ पनि माओवादी काँग्रेस गठबन्धन चुनावमा पराजित भयो । यो पराजय गठबन्धन बनाईदिने भारतको पनि असफलता थियो । दोस्रो चरणको चुनावमा पनि एमालेको जित सुनिश्चित देखेर नै राजपालाई देखाउँदै काँग्रेस माओवादी गठबन्धन असार १४ को दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्न चाहेको हो र अन्तत ः२ नं. प्रदेशमा सारे पनि मालिककै इसारामा ।
राजपा नाम मात्रको मोर्चा हो । तराई मधेसमा अहिले चुनावमा उसले जित्नै सक्दैन । जनता उसका पक्षमा छैनन् । राजपाले लिएको बाटो तराई मधेशका जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि होइन भन्ने कुरा तराई मधेसका जनताले स्पष्ट बुझेका छन् । उनीहरु यो चुनाव प्रयोग गर्न चाहन्छन् । आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी नेकपा एमालेलाई विजयी बनाई तराई मधेसको समस्याको वास्तविक समाधान खोजेका छन् । तराई मधेसको अधिकारको नाममा कसैको गोटी बनेको राजपालाई जनताले पराजित गर्ने भएकाले नै त्यसका नेताहरु चुनाव गर्न चाहेकै छैनन् । चुनावमा राजपा पराजित हुने निश्चित छ । उसको आन्दोलन मधेसी जनताको मुक्तिका लागि हुँदै होइन आफ्नो र भारतको स्वार्थ सिद्ध गर्न हो ।
२ नम्बर प्रदेशमा चुनाव भए एमाले नै पहिलो पार्टी बन्छ,दोस्रो पार्टी उपेन्द्र यादवको बन्छ, काँग्रेस त तेस्रो पार्टी बन्न पनि गाह्रो छ भन्दै सत्तारुढ काँग्रेसका मधेसी नेता तथा सांसदले नै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनाव सार्न दवाव दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । सोही आधारमा अन्ततः २ नं. प्रदेशको चुनाव सार्ने निर्णय गरियो । मुलुकमाथि अर्को भार थप्ने काम भयो । काँग्रेस, माओवादीले मुलुकमा जसरी पनि सत्तामात्रै चाहेका हुन् ? यति लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मवारी बहन गर्नुपर्ने होइन र ? आम नेपाली जनताले सर्वत्र प्रश्न गरिरहेका छन् ।
चुनावमा हारिने डरले चुनावबाट भाग्ने, चुनावमा धाँधली गर्ने, जसरी पनि आफैले मात्र जित्नुपर्ने भन्ने जुन लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति सत्ताधारी गठबन्धन काँग्रेस,माओवादी र गठबन्धनका सहयोगी राजपामा देखिएको छ यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक पक्ष हो ।
लोकतन्त्रमा चुनावी हारजित स्वाभिविक प्रक्रिया हो । यसलाई स्वाभिाविकरुपमा लिन र स्वीकार गर्न नसक्ने पार्टीहरु र नेताहरुलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । तानाशाह र निरङ्कुशतन्त्र चाहनेहरुमात्र चुनावदेखि डराउँछन् । राजपाका दादागिरीसामु विधि र प्रक्रिया विपरीत देउवा र प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरी जसरी २ नं. प्रदेशको चुनाव असार १४ वाट सार्ने निर्णय गरे । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सबै तयारी पूरा गरिसकेको र चारवटै सुरक्षा निकायले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन सकिने अवस्था हुँदाुहँदै पनि राजपालाई देखाएर भारतको इशारामा चुनाव सार्नु नै देउवाको अर्को सफलता हो । यसअघि तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री बने पनि कालो इतिहास बनाएका देउवा अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि त विगतको इतिहासको दाग मेटाउन प्रयास गर्लान् भनेको त फेरि अर्को कालो इतिहास बनाउँदै छन् चुनावबाट भागेर ।